MilagrOS: MX-Linux 17.1 ကိုအခြေခံပြီး Distro သေးငယ်သည် Linux မှ
အံ့ဖွယ်အမှုများ - MX-Linux 17.1 ကိုအခြေခံထားသော Distro လေးတစ်ခု
MilagrOS: Desktop Screenshot
MilagrOS GNU / Linux 1.0 သည်တရားဝင်မဟုတ်သည့် Distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် GNU / Linux MX-Linux 17.1 Distro Project မှဆင်းသက်လာပြီး DEBIAN9(Stretch) ကိုအခြေခံသည်။ MX-Linux 17.1 ကို "antiX" Distros နှင့်ယခင် "MEPIS" တို့၏လက်ရှိလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှနည်းပညာနှင့်အတွေ့အကြုံများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းသည် Tic Tac စီမံကိန်း၏ဗင်နီဇွဲလားဘလော့အဖွဲ့၏အဖွဲ့အောက်တွင်လည်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာ Distro MX-Linux 17.1 တွင် "Systemd" အစား "SysV" ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲတွင်, Kernel level တွင် CPU အဟောင်းများ (32 Bit) နှင့်ခေတ်မီ CPU များ (64 Bit) ရှိသည့်ကွန်ပျူတာများအတွက်ထိန်းသိမ်းမှု။
3 ဆိုက်ကို download လုပ်ပါ
4 MilagrOS: တရားမဝင် MX Linux Respin (လျှပ်တစ်ပြက်)
4.1 MilagrOS 2.2 (3DE3) အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
MilagrOS GNU / Linux သည် MinerOS GNU / Linux နှင့်ဆင်တူသည့် Distro တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် Ubuntu 18.04 ဗားရှင်းကို 64bits အတွက်အခြေခံထားသော်လည်း MX-Linux 17.1 repositories နှင့်ပရိုဂရမ်များကို Systemback application နှင့်အတူ installation system အဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လုပ်ဆောင်သည်။
MinerOS GNU / Linux တွင်မူကွဲ (၂) ခု - ဗားရှင်း ၁.၀ (ISO -2GB) ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်ရင်ပုံမှန် DVD ပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ပြီးအရင်းအမြစ်နိမ့်ကျပြီးကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်တဲ့အဆင့်မြင့်ကိရိယာများမှာတပ်ဆင်ရမည် နှင့် 1.1 (ISO - 7.4 GB) USB သိုလှောင်ရေးကိရိယာများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး GNU / Linux Systems တွင်ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်သောအသုံးပြုသူများနှင့်ခေတ်မီသောပစ္စည်းကိရိယာများတွင်တပ်ဆင်ရမည်။
ထို့ကြောင့် MilagrOS GNU / Linux 1.0 သည် GNU / Linux Distro လည်းဖြစ်သည်၊ သို့သော် MX-Linux 17.1 ကိုအခြေခံသည်။ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်၊ အသုံးပြုရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်၊ လေ့လာရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏ download sites များတွင် ISO ရရှိနိုင်သောကြောင့်
၎င်းတွင် NON-PAE နှင့် PAE cores ဗားရှင်းများပါရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့ပါး။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော XFCE desktop ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသုံးပြုသည်။, နှင့်လက်တွေ့နှင့်အကျိုးရှိစွာယေဘုယျအထုပ်ပေါင်း Distro သူ့ဟာသူ၏ optimization, စိတ်ကြိုက်နှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူဘို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် applications များတစ် ဦး စုဆောင်းမှုရှိပါတယ်။
အပြည့်အဝအခြေခံ distro အဖြစ် MX-Linux ကို 17.1 ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Modern Computers (64Bit ISO) အတွက်အထူးအထောက်အပံ့ဖြင့်။
လော့အင်ဝင်သည့်အခါ 400 နှင့် 512 MB အကြားအလားအလာရှိသော RAM ကိုမှတ်ဥာဏ်သုံးစွဲမှု။
အနည်းဆုံး 1 GB RAM လိုအပ်သည်။
လေးလံသောလျှောက်လွှာအသုံးပြုရန်အတွက် 2GB RAM အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်။
+/- 30 စက္ကန့် startup မြန်နှုန်း
Shutdown speed သည် +/- ၁၅ စက္ကန့်ဖြစ်ပြီး application အားလုံးပိတ်ထားသည်။
ပုံမှန် Login Manager အဖြစ် LightDM ။
ဘက်စုံသုံး - အိမ်နှင့်ရုံးတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Multi-environment: XFCE နှင့် Plasma Desktop Environments ပါရှိသည်။
တည်ငြိမ်။ အိတ်ဆောင်၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီးတိုက်ရိုက်ပုံစံဖြင့်ပါရှိသည်။
ဒါဟာ 3.7 GB ကို ISO ထဲမှာလာပါတယ်။
၎င်းသည် disk space အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ ၁၄ ခုသာတပ်ဆင်ထားသည်။
Webapps (Bookmarks Menu) နှင့်အတူ Cloud တွင်လေ့လာရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
MOTIF Window Manager ကိုအထောက်အပံ့ပြုသည်။
၎င်းတွင် pre-installed Printer နှင့် Multifunctional Driver များစွာပါဝင်သည်။
Multimedia Desktop Environment အဖြစ်အသုံးပြုရန် Kodi Multimedia Center ကိုအသုံးပြုထားသည်။
၎င်းသည် System ပြန်လည်ထူထောင်ရေး application: Systemback နှင့်အတူပါရှိသည်။
၎င်းသည်မူလအခြေခံအထုပ် (ကိုယ်ပိုင်) ကိုထည့်သွင်းထားသော MX Linux 17.1 ထည့်သွင်းထားသည်
၎င်းတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း software ထည့်သွင်းထားသည်။
MinerOS GNU / Linux နှင့်မတူသည်မှာခေတ်သစ် libcurl3 စာကြည့်တိုက်အစား libcurl4 စာကြည့်တိုက်ရှိသည်။
ဆိုက်ကို download လုပ်ပါ
ဖြစ်ခြင်းအချိန်ကိုများအတွက် ကူးယူနိုင်သော MilagrOS GNU / Linux 1.0 ၏ ISO ပုံရိပ်ကိုသာရရှိနိုင်သည် အောက်ပါဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိစကားစုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။ « Tic Tac စီမံကိန်း | Distros ».
နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များ ဤဆောင်းပါးကိုပြင်ဆင်သည့် နေ့မှစ၍ ယနေ့အထိ၊ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ၊ အံ့ဖွယ်အမှုများ ၏အခြေစိုက်စခန်းပြောင်းလဲသွားတယ်သိရသည် MX ကို Linux 17.XaMX ကို Linux 19.X, ယခုယခင် Debian ကဲ့သို့ Debian 10 မဟုတ်ဘဲ Debian9ကိုအခြေခံသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပိုမိုပြည့်စုံပြီးပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း။ အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြချက်အရအခမဲ့ (၂.၆ GB GB Full) ကို Alpha (2.2 GB Lite) နှင့် Omega (2 GB Full) ဟုခေါ်သောဗားရှင်း ၂.၂ ကိုအသုံးပြုထားသည်။
MilagrOS: တရားမဝင် MX Linux Respin (လျှပ်တစ်ပြက်)
ဤရွေ့ကား၊ လက်ရှိကြည့် ထိုနေ့အတွက်
MilagrOS 2.2 (3DE3) အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
MilagrOS GNU / Linux သည် MX-Linux ကိုအခြေခံပြီးပေါ့ပါး။ လှပသော၊ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်၊ အားကောင်းသော၊ တည်ငြိမ်။ ၊ အိတ်ဆောင် Distro ဖြစ်သည်။ဤကဲ့သို့သော live format နှင့်လာပြီးကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့် package များစွာနှင့်ပါလာသည်။ ဒါကြောင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင်၊ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမလိုဘဲအသုံးပြုပြီးမည်သည့်ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူမဆိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အများဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းကိုပြောနိုင်သည် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux အင်တာနက်မလိုအပ်သည့် multi-functional Distro တစ်ခုကိုတုပရန်ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » အံ့ဖွယ်အမှုများ - MX-Linux 17.1 ကိုအခြေခံထားသော Distro လေးတစ်ခု
Gabriel Antonio Oro Berrío ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း။ ကျွန်ုပ်၏ browser သည် Chromium မဟုတ်သောကြောင့် download လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသော Mega application ကိုတန်ဖိုးကြီးစွာ download ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန်MílagrOs Linux ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်နေပါသည်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူများကိုအများဆုံးသိရှိစေရန်ဖြစ်သည်ဆိုပါက Mega မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုစာရေးသူ site မှသော်လည်းကောင်း၊ Mega ကဲ့သို့ပြaticနာမရှိသောစာမျက်နှာမှသော်လည်းကောင်းတိုက်ရိုက် download လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြား operating system မှ MIlagrOs သို့ပြောင်းချင်သောမည်သည့်အစပြုသူကိုမဆိုအရှုံးပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gabriel Antonio De Oro Berríoအားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၎င်းကိုဂူဂဲလ်ဒရိုက်ထဲထည့်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤဆိုဒ်တွင်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။ https://distrotest.net/MilagrOS
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကူးယူပြီးပြီ။ ၎င်းသည်အံ့ဖွယ်ကောင်းပုံရသည်၊ သို့သော်၎င်းကို Mega မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၏ပြtoနာအပြင်၊ Admin (သို့) Root စကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲ၍ စကားဝှက်နှစ်ခုကိုစီမံရန်မလွယ်ကူခြင်း၊ သငျသညျအစမှစ။ တစ်ခုတည်းစကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ခွင့်ပြုအခြား distros ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရပ်တည်ချက်ကိုအခိုင်အမာဆိုပါသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကို၎င်းကို download လုပ်ခြင်းသည် Mega ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသောအခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်နေရာချပြီးစကားဝှက်ကိုအစမှပြန်လည်ခွင့်ပြုသင့်သည်။ မဟုတ်ပါကကောင်းမွန်သောပရိုဂရမ်များ၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်စာကြည့်တိုက်တွင်အလွန်တည်ငြိမ်။ မြန်သည်။ ဂိမ်းများနှင့်အားသာချက်မှာဘာသာစကားတစ်ခုကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ အပလီကေးရှင်းအားလုံးက၎င်းကိုယူဆပြီးသင်ပိုမိုရွေးချယ်ရန်ဘာသာစကားရွေးချယ်စရာမလိုပါ။ ပြင်ရန်နောက်တစ်ခုမှာဘာသာပြန်များဖြစ်သည်၊ အနည်းဆုံးစပိန်တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်များတွင်မမှန်ကန်သည့်စကားလုံးအချို့ပေါ်လာသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကြံပြုထားသောစကားဝှက်များကိုထိန်းသိမ်းရန် "ထောက်ခံချက်" (တာဝန်မရှိ) အောက်တွင်ထည့်သွင်းပြီးပါက "passwd root" နှင့် "passwd sysadmin" ဟူသော command ဖြင့်အလိုရှိပါကသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဘာသာပြန်များသည် MX-Linux base နှင့်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင် ၁၇.၁ မှ ၁၈ အထိရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်း ၁၈ ကျော်မှဗားရှင်း ၁.၁ ကိုလုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည် ဆက်လက်၍ မပြေလည်စေရန် "နည်းနည်းပြproblemနာ" ကိုသူတို့ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ကောင်းမွန်သောမှတ်ချက်များအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ CPU နှင့် RAM သုံးစွဲမှုကိုသင် activate လုပ်လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုနည်းပါးသလောက်သဘောကျမည်ဟုသင်မျှော်လင့်ပါသည်။
Max sarkus ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် distro ကိုနှစ်သက်ပါသည်။ ၎င်းသည် wifi board အတွက်ဒရိုင်ဘာများစွာနှင့်တင်ဆောင်ခြင်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျပါသည်။ ငါလိုချင်တာက Matte Desktop ပေါ်မှာရှိတယ်။ ရုံမိတ်လိုက်။ ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲ ??
Max Sarkus အားပြန်ပြောပါ
Application ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့် Desktop Environment ကိုမဆို install လုပ်နိုင်သည်
အောက်ပါ command များကိုတပ်ဆင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်သည့်« Tasksel »
taskel install apt
အကယ်၍ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုခုကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းလိုပါကအောက်ပါ command များကိုလုပ်ဆောင်ပါ
apt gdm3 gnome gnome-search-tool သည် gnome-system-tools ကို install လုပ်ပါ
• apt installdm lightdm xfce4 gtk3-engines-xfce xfce4-goodies xfce4-messenger-plugin xfce4-mpc-
xfce4-pulseaudio-plugin ကို plugin ကို
• apt install လုပ် mate-core mate-desktop-environment mate-desktop-environment-core mate-desktop-
ပတ်ဝန်းကျင် - extras မိတ်ဖက် - menus တွေကိုမိတ်ဖက် - အာရုံခံကိရိယာ - applet mate-system-tools တွေကို task-mate-desktop ကို
• apt install kinnamon kinnamon-desktop-environment task-kinnamon-desktop
• libfm-tools လိပ်စာ apt ကိုထည့်သွင်းပါ lxappearance lxde lxde-core lxlauncher lxmusic lxpanel
• sddm plasma-desktop plasma-nm plasma-runner-installer plasma-runners- ကို install လုပ်ပါ။
addons plasma-wallpapers-addons sddm-theme-breeze sddm-theme-elarun sddm-theme-debian-
ဒီသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုမေးခွန်းများရှိပါကဤလင့်ခ်တွင်တွေ့ရသောအလုပ်ခွင်စာတမ်းများကိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုလိုပါသည်။ https://proyectotictac.com/2019/01/10/papeles-tecnicos-del-proyecto-tic-tac/
Tor Browser: တည်ငြိမ်သော version 8.0.3 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
Debian 9.6 Stretch သည်ရာနှင့်ချီသောမွမ်းမံချက်များနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်